May 9, 2020 - UpdateNew
ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် အများသိအောင် ဝေမျှပေးကြပါ
May 9, 2020 UpdateNew 0
ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် အများသိအောင် ဝေမျှပေးကြပါ လုပ်စားဂိုဏ်းများအကြောင်း သိစေရန် အရင်ကတည်းက လူနဲနဲပျက်ပြီးကားနဲနဲရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာ ဒီလိုလူတွေ ဂိုဏ်းဖွဲ့ပြီး လုပ်စားနေကြပါတယ်။ လက်ရှိ ကိုဗစ်ကာလ မှာနေ့လည်ပိုင်းတောင် လူရောကားပါ ရှင်းတဲ့နေရာ တော်တော်များလာတော့ ဒီလိုလုပ်စားဂိုဏ်း တွေအတွက် ခွင်ပိုကောင်းလာတယ် ဆိုရပါမယ်။ကျနော်က ဗဟန်းမှာနေသာပါ။ မေ- … ..ရက်နေ့က အိမ်အပြန် […]
ဖုန်းလာရင် ” ဟယ်လို ” ဆိုပြီး ထူးကြတာဘာကြောင့်လဲ
ဖုန်းလာရင် ” ဟယ်လို ” ဆိုပြီသာ ထူးကြတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ မသိသေးရင် ဖတ်ကြည့်ပါ ဖုန်းလာရင် ” ဟယ်လို ” ဆိုပြီး ထူးကြတာဘာကြောင့်လဲ ဖုန်းဝင်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းလာတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ” ဟယ်လို” ဆိုပြီး စတင်ပြောဆိုလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဟယ်လိုဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို သိကြပါလား..၊ […]
(၇)တန်း ကျောင်းသူလေးအား သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်ခံရမှု…. ၁၄နှစ်အရွယ်(၇)တန်းကျောင်းသူလေး သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်ခံရမှု တရားဥပဒေစိုးမိုးစေရန်နဲ့ တရားရုံးစောင့်ကြည့်ဖို့ ဝန်းရံ ၁၄ နှစ်အရွယ် ၇ တန်း ကျောင်းသူလေးကို တစ်ရွာထဲနေသူ အမျိုးသားတစ်ဦးမှ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ရန် ကြံစည်ခံခဲ့ရတဲ့အပေါ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့ ကလေးသူငယ်နဲ့ အမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်ခံရမှု တားဆီးကာကွယ် ပပျောက်ရေးကွန်ယက် နှင့် မန္တလေး […]
မန္တလေးတွင် MASK မတပ်ပါက စတင်အရေးယူတော့မည်
မန္တလေးတွင် MASK မတပ်ပါက စတင်အရေးယူတော့မည် မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာ နေအိမ်အပြင်ထွက် သွားလာသူတွေ‌အနေနဲ့ Mask တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါက အရေးယူတော့မယ်လို့ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Mask စနစ်တကျတပ်ဆင်ပြီး သွားလာဖို့ကို မေလ ၉ ရက်နေ့ကနေ ၁၅ ရက်နေ့အထိ အသိပညာပေးကာလအဖြစ် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲရေး […]
စီးပွားတက်မည့်အိမ်..ကိုယ်ယခုနေထိုင်နေတဲ့ အိမ်ဟာဘယ် အမျိုးအစားထဲပါနေလဲဆိုတာ လေ့လာ ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်…
စီးပွားတက်မည့်အိမ်..ကိုယ်ယခုနေထိုင်နေတဲ့ အိမ်ဟာဘယ် အမျိုးအစားထဲပါနေလဲဆိုတာ လေ့လာ ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်… စီးပွားတတ်မည့်အိမ်… ကိုယ်ယခုနေထိုင်နေတဲ့ အိမ်ဟာ ဘယ်အမျိုးအစားထဲ ပါနေလဲဆိုတာ လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ အိမ်၏ ခေါင်းရင်းနေအိမ်သည် မိမိအိမ်ထက်မြင့်မည်…ခြေရင်းအိမ်သည်လည်း မိမိအိမ်ထက်မြင့်ပါက ကိုယ်နေသောအိမ်သည် အမိုးနိမ့်နေလျှင်အိမ်ပုခက် ဟုခေါ်သည် ။ နေသောမိသားစုသည် စီးပွားတက်၏ ။ ကိုယ့်အိမ်ခေါင်းရင်းအိမ်က အမိုးနိမ့်မည် ။ကိုယ့်အိမ်ခြေရင်းကလဲ […]
တစ်ရွာလုံးနီးနီးပါပဲ မီးထဲပါသွားတာ ဘာမှကိုမရလိုက်ကြဘူးတဲ့ဗျာ
တစ်ရွာလုံးနီးနီးပါပဲ မီးထဲပါသွားတာ ဘာမှကိုမရလိုက်ကြဘူးတဲ့ဗျာ တောရွာလည်းဖြစ် ခုလိုကပ်ရောဂါကြီး ကျရောက်နေချိန် ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ ပိုဆိုးပေါ့ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ စစ်ကိုင်းတိုင်း မြင်းမူမြို့နယ် စိုင်းမင်းရွာ တစ်ရွာလုံးနီးနီးပါပဲ မီးထဲပါသွားတာ ဘာမှကိုမရလိုက်ကြဘူးတဲ့ဗျာ တောရွာလည်းဖြစ် ခုလိုကပ်ရောဂါကြီး ကျရောက်နေချိန် ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ ပိုဆိုးပေါ့ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ 😭😭😭 ကိုယ်ရွာရဲ့ အနောက်ဘက်ကရွာဆိုတော့ […]
ယခင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဟောခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယလူငယ်ဗေဒင်ဆရာ နောက်ထပ်ဟောကိန်းတစ်ခု ထပ်ထုတ်.
ယခင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဟောခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယလူငယ်ဗေဒင်ဆရာ နောက်ထပ်ဟောကိန်းတစ်ခု ထပ်ထုတ် အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် အိန္ဒိယလူငယ် ဗေဒင်ဆရာ Abhigya Anand က နောက်ထပ်ဟောကိန်းထပ်ထုတ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ထက်ပိုပြီး ဆိုးဝါးပြီး ကြောက်စရာကောင်းမည်ဟုဆို။ လူတွေ ငတ်ပြတ်ကြလိမ့်မည်ဟုဆို :(> သူသည် လွန်ခဲ့သော ၇ […]